Yintoni iNetography? | Martech Zone
NgeCawa, ngo-Novemba 8, 2020 NgoMvulo, Matshi 15, 2021 Douglas Karr
Nonke nizivile iingcinga zam abantu abathengi kwaye i-inki ebonakalayo ayomile kule post yebhlog, kwaye sele ndiyifumene indlela entsha ebhetele yokudala ii-personas zabathengi.
I-Netnografi ivele njengeyona ndlela ikhawulezayo, isebenzayo, kwaye ichanekile yoyilo abantu abathengi. Enye yeendlela zoku kukuba iinkampani zophando ezikwi-Intanethi zisebenzisa idatha esekwe kwindawo yemithombo yeendaba (i-geotagged) ukuhlalutya unxibelelwano lwentlalo kunye nokukhethwa kwabathengi ngokusekwe kwindawo echaziweyo. La maqonga anokuvumela abasebenzisi ukuba barhuqe irediyasi ejikeleze nayiphi na indawo abayikhethayo, kwaye "bakrobe" zonke iintlobo zedatha kubantu abakuloo ndawo.
I-Netnografi lisebe le-ethnografi (inkcazo yesayensi ngamasiko abantu kunye neenkcubeko) ehlalutya indlela yokuziphatha kwabantu be-Intanethi abasebenzisa iindlela zophando zentengiso kwi-Intanethi ukubonelela ngolwazi.
I-Netnografi idibanisa kwaye ihlalutye idatha malunga nokuziphatha kwasimahla kwabantu kwi-Intanethi. Isitshixo kukuba le datha iyaqokelelwa xa abathengi beziphatha ngokukhululekileyo, ngokuchaseneyo nophando olwenziwe apho abathengi ngamanye amaxesha baphendula khona ukuthintela iintloni okanye ukukholisa umvavanyi.
Uphando lomthengi Iingxelo zenziwe ngedatha yeenjongo ezizezona zikhombisi zokwenyani zendlela yokuphila, imveliso kunye nokukhetha uphawu. Abahlalutyi bophando baqulunqa iingxelo kwaye emva koko benze iprofayili yamacandelo abantu abathengi kwimveliso okanye kwinkonzo yakho.
Isixhobo esihle kakhulu kubathengisi kuba idatha inokuqulunqwa ngokukhawuleza nangokuchanekileyo. I-Netnografi kuluncedo kuba iinkampani zinokwenza ukuba iiprofayili zazo zihlanganiswe kwangoko kunokuba zithathe iiveki okanye iinyanga ukuqokelela uphando. Lowo ngumahluko omkhulu kuphando lwemveli olunokuthi ngamanye amaxesha luthathe iinyanga ukwenza kunye nokuhlalutya. Ngexesha lokufumana olo hlobo lophando, umntu wakho womthengi sele sele etshintshile kancinci. Okanye kakhulu.
Ke, ngephanyazo, uyazi ukuba ngoobani abathengi bakho abanenzuzo, yintoni abanomdla kuyo ngalo mzuzu, kwaye njani kwaye kutheni benxibelelana noontanga babo.
Olu hlobo lophando lomntu luhambisa idatha ebalulekileyo malunga nabathengi bakho abanenzuzo kubandakanya umvuzo wekhaya, ubuhlanga, amanqaku entlungu, iinjongo, iimpembelelo, imisebenzi / izinto zokuzonwabisa, kunye nokunye. Ezi ngxelo zinokukuxelela ukuba yeyiphi iwebhusayithi okanye uphawu lomntu ngamnye olunokuthi lusebenze kunye namagama aphambili aphezulu onokuwasebenzisa ukufikelela kuwo.
Ukuba unomdla wokuthenga ingxelo yeNetnografi kubathengi bakho, nceda Qhagamshelana nam.
tags: abantu abathengiubuhlangawebokisimuphando lomntuumntuURobert Kozinets
Ukuphucula i-WordPress 'yokuKhangela okuPhakathi kweSiza ngokuKhangela okuPhambili kweJetpack